कस्तो अवस्थामा पिसिआर गर्ने ? पिसिआर गर्दाको फाइदा « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७७, १४ कार्तिक शुक्रबार १२:५१ मा प्रकाशित
२. कोभिडमा ज्वरो, जिउ दुख्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षण शुरुका केही दिनपछि धेरैमा हराउँछन् वा मत्थर हुन्छन् । अनि दोस्रो हप्तातिर एक्कासी ज्वरो आउने, स्वाँ स्वाँ बढ्ने, अक्जिन चाहिने हुनसक्छ । प्रायः बिरामीले १—२ दिन देखिएर लक्षण हराएपछि वास्ता गर्न छाडिदिन्छन् । पिसिआर गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । तर जाँच गर्दा रोगको पहिचान हुने सम्भावना भने लक्षण शुरु भएको बेलातिर सबैभन्दा बढी हुन्छ, केही दिनमै पिसिआरको पहिचान गर्ने क्षमता धेरै घट्छ भने दोस्रो हप्तामा सिकिस्त भइसकेपछि परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिने सम्भावना धेरै कम हुन्छ र सही उपचार नपाउने, गलत उपचार पाउने सम्भावना बढ्छ ।
(यो जानकारी डा. सुवेदीको ट्विटरबाट साभार गरिएको हो ।)